ဆောင်းရာသီအတွက် ၊ ဆားဝက်ခြံအတွက် ၊ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ အတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဆောင်းရာသီအတွက် ၊ ဆားဝက်ခြံအတွက် ၊ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ အတွက်
ဆောင်းရာသီအတွက် ၊ ဆားဝက်ခြံအတွက် ၊ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ အတွက်
Posted by မမလေး on Oct 27, 2012 in Health & Fitness | 14 comments
သစ်သီးများနှင့် လှပစေမည် . . .
ဒီကိုမရောက်တာ နည်းနည်းကြာသွားတော့ post ဘယ်မှာတင်လဲဆိုတာ မေ့တေ့တေ့ဖြစ်နေလို့ တော်တော်ရှာယူရသေးတယ်
ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရမ်းပတ်တတ်တဲ့ ခြောက်သွေ့အသားအရေရှိသူတွေအတွက် ထောပတ်သီးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်တယ်နော်။ ထောပတ်သီးအသားကို ခက်ရင်းနဲ့ချေပြီး သံလွင်ဆီနည်းနည်း ရောမွှေလိုက်ပါ။ အနှစ်ပျစ်ပျစ်လေးရလာတဲ့အထိ ချေနော်။ ပြီးတော့ မျက်နှာအနှံလိမ်း.. နာရီဝက်နေရင် ရေဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။ မျက်နှာလေးက နူးညံချောမွေ့သွားလိမ့်မယ်နော်။
ဆောင်းရာသီရဲ့ အအေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လုပ်ပေးမယ့် နည်းလေးပါပဲ။ ဂျုံမုန့်၊ ကြက်ဥအနှစ်နဲ့ ပျားရည်ကို ဆတူရောမွှေပါ။ မျက်နှာပေါ်မှာ မိနစ်၂၀ ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်တဲ့အခါ နူးညံ့ စိုပြေ၀င်းပတဲ့မျက်နှာလေး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။
ပေါင်းစပ်အသားအရေပိုင်ရှင်တွေ ဆောင်းရာသီမှာ မျက်နှာပေါင်းတင်ချင်ရင် ဌက်ပျော်သီးလေးကိုပဲ သတိရလိုက်ပါ။ ငှက်ပျောသီးလေးကို သေချာချေပြီး မျက်နှာအနှံလိမ်းပြီး နာရီဝက်နေရင် ရေဆေးချလိုက်..
အသားအရေကို နူးညံ့စေတဲ့ ချောမွေ့စေတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဖြည့်ပေးတဲ့ ငှက်ပျောသီးလေးရဲ့ အံ့ဖွယ်စွမ်းပကားကို အရမ်းကျေးဇူးတင်သွားမှာနော်။
ဒီနည်းလမ်းတွေကို တစ်ပတ်ကို ၁ – ၂ ကြိမ်သာလုပ်သွားလိုက် …
ဆောင်းရာသီမှာ အသားခြောက်၊ အသားပတ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုပါ မေ့သွားလိမ့်မယ်နော်
၀က်ခြံထွက်နေသူတွေအတွက်ကတော့ ဖီကြမ်းငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ ပွတ်ပေးရင်ပါးပြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ …
ဆားဝက်ခြံကို လက်ပြနှုတ်ဆက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်
– ခရမ်းချဉ်သီးကို ပျစ်သွားတဲ့အထိ ကြိတ်ချေပြီး ဆားဝက်ခြံ ရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာ ၁၅ -၂၀ မိနစ်ခန့်ထားပြီးနောက် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ဒီတိုင်းပဲထားနော်။ Moisturizer ကို ချက်ချင်းမလိမ်းရဘူး။
– ပျားရည်ကို နွေးနွေးလေးဖြစ်အောင် အပူပေးပြီး ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာမှာ ၁၅ -၂၀ မိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ။ ဒီနည်းလေးဟာ လူသုံးများပြီးအလွန်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
– မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အနည်းငယ်ကို ရေနှင့် ဆတူရောစပ်ပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်တင်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ် ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ ထို့နောက် ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ။
– ထူးဆန်းတဲ့နည်းလေးလည်း ရှိသေးတယ်နော်။ အမြှပ်ထအောင် ခေါက်ထားတဲ့ ကြက်ဥအကာကို ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာ လိမ်းလိုက်ပြီး အပေါ်က တစ်ရှုးလေးကပ်လိုက်ပါ။ နာရီဝက် ဒါမှမဟုတ် ခြောက်သွားတဲ့အခါ ဖြေးဖြေးလေးဆွဲခွာပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ရင် Ok ပြီ။
(၁) နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်ခွက်စာကိုရောပြီးရင် မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပြီး ၁၀ မိနစ် ထားထားနော်။ ပြီးတော့ ရေအေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာလေးဟာ သန့်စင်ပြီး ၀င်းပလာပါလိမ့်မယ်။
(၂) ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံး၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းနဲ့ လိမ္မော်ရည်စက်အနည်းငယ်ကို ရောမွှေလိုက်နော်။ သေသေချာချာကြေညက်သွားရင် ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာ ပါးပါးလေး သုတ်လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ် လောက်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းလေးက မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်တွေကိုလည်း သန့်စင်စေပါတယ်။
(၃) ခရမ်းချဉ်သီး (အလတ်စား) တစ်လုံးကို အရည်ထွက်လာအောင် ကြိတ်ပါ။ ပြီးရင် သံပုရာရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်နဲ့ရောပြီး မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်း၊ ၁၀ မိနစ်ထားပြီးရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်ကလေးတွေကို ကျဉ်းစေတဲ့အပြင် ၀က်ခြံတွေကိုလည်း လျော့နည်းသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
(၄) ရေစင်စင်ဆေးထားတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီး ၄ – ၆ လုံးကို ခွက်ထဲထည့်ပြီး ခရင်းနဲ့ ချေလိုက်နော်။ ပြီးတော့ ဒိန်ချဉ်တစ်ဇွန်းနဲ့ရောပြီး မျက်နှာမှာ သုတ်လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ ထားပါ။ ပြီးရင် ရေအေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။
(၅) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးပါတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးကို အခွံခွာ၊ အစိပ်သေးသေးလေးတွေ လှီးပြီး မွှေစက်ထဲ ထည့်ပြီး အနှစ်လေးရတဲ့အထိ မွှေပါ။ ပြီးရင် ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်းနဲ့ရောပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ပါးပါးလေးလိမ်းပါ။ ၁၅ မိနစ် ပြည့်ရင်ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းပြီး နူးညံ့ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ရမှာပါ။
(၆) နောက်တစ်နည်းကလည်း ပန်းသီးနဲ့ ပျားရည်ပါပဲ။ ပန်းသီးတစ်ဝက်ကို အခွံခွာပြီး ရေနွေးထဲမှာ ခဏစိမ်လိုက်နော်။ ပြီးတော့ ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းရယ်၊ ဂျုံမှုန့် ၂ ဇွန်းရယ်နဲ့ ပေါင်းပြီး အနှစ်လေးရတဲ့အထိ ချေပါ။ ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ၁၀ မိနစ်ထားပြီး ရေဆေးချလိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်တွေကျယ်ပြီး ၀က်ခြံလည်းရှိတဲ့ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ နည်းလေးပါပဲ။
(၆) သခွားသီးကို အတုံးသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင်တုံးပြီး ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ဂျုံမှုန့် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်ခွက်စာနဲ့ မွှေစက်ထဲမှာ လုံးဝကြေညက်သွားတဲ့အထိ ထည့်မွှေပါ။ ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ၁၀ မိနစ်လိမ်းထားပြီး မျက်နှာသစ်လိုက်နော်။ ဒီနည်းက ချွေးပေါက်တွေကို သန့်စင်စေပြီး ၀က်ခြံတွေလည်း သက်သာစေတယ်လေ။
ကဲ … စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးနော် ချစ်သူ …
စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဗျာ ကျုပ်မျက်နှာက အဆီအရမ်းပြန်တာဆိုတော့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ …
ကိုယ့်မျက်နှာ ခန့် ချောမြဲအတိုင်း ခန့် ချောတော့မှာ အသေချာပဲ ဟီဟိ
သွားစမ်းကြည့်မိရင်တော့ မဒမ်ထူးဆန်း အထင်မှားတော့မယ်.. :harr:
Padonmar : မှတ်မိသေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
စကားမစပ် အရမ်းလှလို့ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ရင်တာဝန်မယူဘူးနော် …
ဒီမှာတောင် ဘဲကြည်တဲ့ အားနည်းချက်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူး
” ဒီမှာတောင် ဘဲကြည်တဲ့ အားနည်းချက်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူး ”
ဒီကွန်မန့်လေးကို သဘောကျလို့ ၊
ဒီ Post ကိုပါဝင်ဖတ်သွားပါတယ် ။
ကွန်းမန့်ကဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်ပေါ့နော် …
မမလေး ပြန်လာတာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဘဘ ကတော့ မှတ်မိပါတယ်ကွယ်..။
ဒီပိုစ့်ထဲက နည်းလေးတွေကို လုပ်ရလွယ်လို့သဘောကျတယ်
ဘဘ မြေးတွေကို ပြန်ပြောပြလိုက်မယ်နော…။
ဦးဦးပါလေရာကတော့ပိုပြီ … စကားမစပ် နေကောင်းကြပါတယ်နော် … အရမ်းသတိရနေတာ …
အိမ်မှာပြန်လုပ်ဖို့ နည်းလေးတွေကူးသွားပါတယ်.. ကျေးဇူးပါနော်…
မမလေးခေါ် gongzhu ရေ ..
လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ …
မမလေးပဲ ပေါ်တာမလား … gongzhu ကိုဘယ်လိုလုပ်သိနေသေးတာလဲ ? မသိလို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …